Fandefasana tambajotra eran-tany momba ny fizahantany: Mahagaga fotsiny
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fandefasana tambajotra eran-tany momba ny fizahantany: Mahagaga fotsiny
Ity volana ity dia ny fandefasana ny Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN). Teraka tamin'ny malaza fananganana.travel fifanakalozan-kevitra, World Network Network no feo efa ela niverenan'ireo orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny ezaka, ny WTN dia mametraka lohalaharana ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ny mpiray antoka aminy.
Ny hetsika fandefasana dia tsy misy afa-tsy mahagaga ary ahitana mpilalao fizahan-tany avy amin'ny firenena 123.
Ny Alakamisy, ny Lehibeny Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, filohan'ny Fahefana Bahrain for Culture and Antiquities, no hitarika ny ambaratonga ambony ho an'ny mpitondra fizahan-tany, ny minisitra ary ny kandidà sekretera jeneralin'ny UNWTO, anisan'izany ny Dr. Taleb Rifai. Izy no vehivavy voalohany notendrena ho amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO ary malaza amin'ny zava-bitany tamin'ny fanohanana ny fiarovana ny kolontsaina sy ny fizahan-tany maharitra.
Amin'ny Alarobia, ny hetsika fanokafana ofisialy dia hampahafantatra toko eo an-toerana manomboka amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. “Fikambanana haorina hatrany ambany ka hatrany izahay. Toko sy vondron'olona liana isan-karazany no mitondra ny fikambananay, "hoy ny mpikambana mpanorina Juergen Steinmetz, izay mpanonta ny eTurboNews.
Ny lisitr'ireo vondrona liana mitombo dia misy ny fifanakalozan-kevitra momba ny fiaramanidina, fampiasam-bola, fanofanana, toetrandro, tanàna kely ara-kolontsaina ary mazava ho azy COVID-19.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny fankalazana ny Fahatsiarovana ny fandriam-pahalemana mandritra ny 35 taona amin'ny alàlan'ny fizahan-tany. Ny mpanorina ny InIvon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany (IIPT) dia mitondra tontonana iraisam-pirenena.
Profesora Geoffrey Lipman dia manolotra tabilao momba ny dia amin'ny toetr'andro sy, Ny tontalin'i Vijay Poonoosamy dia handinika ny Aviation Challenge.
Hetsika sy takelaka ampolony avy amin'ny mpikambana WTN no haseho amin'ny volana Desambra. Ny fampisehoana rehetra dia halefa mivantana ihany koa eTurboNews ary sehatra vaovao 16 hafa, Livestream.travel, media sosialy, Spotify, ary Apple. Ny famelabelaran-kevitra dia averina averina fihodina mandritra ny 2 volana ho avy. Maimaimpoana ny fanatrehana sy fametrahana fanontaniana. Misoratra anarana ao amin'ny www.tw.travel/expo
WTN dia nanangana ny fampirantiany manerantany ary nantsoina hoe World ExpoTravel. Manangona ny fampisehoana rehetra amin'ny sehatra VIMEO iray amin'ny www.worldexpo.travel
WTN dia maniry ny hanatevin-daharana ny antoko ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny naman'ny indostrian'ny fizahan-tany www.tw.travel/expo
Misoratra anarana amin'ny World Expo mitohy ataon'ny World Tourism Network
IZY Najib Balala
Deepak Joshi sy Pankai
Ny Chief UNWTO teo aloha dia nanana ny ampy! Ireo firenena mpikambana dia nampandrenesina
Sandals Resorts: 2 taona isan-taona Stewart Family Philanthropic Award nambara